Israa&#039;iil oo uga digtay muwaadiniinteeda safarada Hindiya | Universal Somali TV
Israa'iil oo uga digtay muwaadiniinteeda safarada Hindiya
December 31 2016 10:54:49
Agaasinka la-dagaallanka argagixisannimada Israa'iil ayaa soo saaray digniin safarka Hindiya, iyagoo xiganaya "weerarro argagixiso" degdeg ah oo la damacsanyahay in lala eegto dalxiisayaasha iyo bartilmaameedyada ree galbeedka, gaar ahaan koonfur-galbeed ee dalkaasi.
Hadalka oo kasoo baxay xafiiska ra'iisal wasaaraha Israel ayaa jimcihii, sara u kiciyey heerka digniinta oo sheegay in ay jirto"khatar halis ah". "Waxaan u digeenaa Yahuuda ku nool Hindiya ee suuraggalnimada weerarro argagixisada ka dhanka ah reer galbeedka iyo dalxiisayaasha, gaar ahaan koonfur-galbeed ee dalka," ayaa lagu yiri bayaanka.
"Waa in xooga la saara amaanka maalmaha soo socda ee dhacdooyinka la xidhiidha xeebta iyo goobaha loogu dabaal degayo sanadka cusub oo ay joogaan qaar ka mid ah dalxiisayaasha oo noqon doonta bartilmaameedyada la damacsanyahay in weerarada laga fuluyo ."
Kan-xigaMadaxda caalamka oo dhaleeceeyay Aung...
Kan-horeKabila oo iska casili doona xilka ka ...
33,284,399 unique visits